हालसम्म साउदीमा १३ सय ६४ नेपाली कामदार को'रोना सं'क्रमित, ७ जनाको ज्या'न गयो ! -
हालसम्म साउदीमा १३ सय ६४ नेपाली कामदार को’रोना सं’क्रमित, ७ जनाको ज्या’न गयो !
काठमाडौँ । साउदी अरबमा को’रोना भा”इरस (कोभिड १९) बाट सं’क्रमित नेपालीको संख्या १७ महिलासहित १३ सय ६४ पुगेको छ । ७ जनाको मृ’त्यु भएको छ । एक हप्ताको अवधिमा ६ सय ९० जनामा को’रोना पुष्टि भएको हो । वैशाख ३० गतेसम्म ६ सय ७४ जना सं’क्रमित थिए । साउदीको स्वास्थ्य मन्त्रालयले रियादस्थित नेपाली दूतावासलाई सं’क्रमित नेपाली कामदारको विवरण उपलब्ध गराएको हो । राजदूत महेन्द्रसिंह राजपुतका अनुसार साउदी स्वास्थ्य मन्त्रालय र विदेश मन्त्रालयले यो सूचना उपलब्ध गराएको हो ।
सं’क्रमित नेपालीमा राजधानी रियाद क्षेत्रमा २९९ जना, पूर्व क्षेत्रमा ६९५, कसिम क्षेत्रमा १९ जना, अन्य क्षेत्रमा ३ जना छन् । त्यस्तै जेद्दा १७६, मक्का ६५, मदिना ७२, जाजान क्षेत्रमा ३३ र ताबुकमा २ जना सं’क्रमित भएका छन् । साउदी अधिकारीहरुका अनुसार सं’क्रमणबाट निको हुने नेपालीको संख्या उच्च छ ।
को’रोनाको सं’क्रमण भएकासँग टेलिफोन सम्पर्कमा रहनेलाई उच्च मनोबल दिने र हौसला प्रदान गर्ने प्रकारका कुराकानी गर्न दूतावासले अनुरोध गरेको छ । साउदीमा को’रोना भा’इरसबाट सं’क्रमितको संख्या ६५ हजार ७७ जना पुगेको छ । बुधबार २५ सय ३२ जना नयाँ सं’क्रमित फेला परे । २५ सय ६२ जना निको भएका छन् ।